Ungayivula Kanjani iDispensary Illinois | Ukudayiswa Kwe-Cannabis Kuchaziwe
Ufuna Ukuvula Isaphulelo
Ungayivula kanjani i-Cannabis Dispensary e-Illinois?
Ukuvula i-cannabis disensary kuyiphupho labaningi elikhuthazwa ukushesha okuluhlaza kwensangu njengoba izifundazwe eziningi zanda ngokomthetho. Ibhizinisi le-cannabis iTHC kulindeleke ukuthi likhule lisuke cishe ku-20 Billion ngo-2020 liye ku-80 Billion ngo-2030 njengoba izifundazwe eziningi ziya zivuma. Namuhla, sizogxila ekuvuleni izikhungo zemakethe ezikhulayo e-Illinois.
Ngo-2019, i-Illinois yaba yisifundazwe se-11 sokufaka insangu kwezokungcebeleka ngokusemthethweni. Futhi bekungumbuso wokuqala ukufeza lokhu ngokusebenzisa umthetho.
Njengamanje kunezikhungo ezingama-55 ezinamalayisense ezokwelapha e-cannabis esifundazweni, njengoba insangu yezokwelapha ibisemthethweni kusukela ngo-2014.
Ukuvula Izidakamizwa Ezintsha Zentsangu e-Illinois
I-Illinois izokhipha izicelo zokuthengisa insangu ezingafinyelela kuma-75 kubafakizicelo ngoMeyi 2020 (kubambezelekile), ngezicelo ezenziwe zatholakala kusukela ngo-Okthoba 2019. Ngemali engenayo eyenziwe ngamakhompiyutha e-cannabis ezigidini zezigidi zamadola futhi ekhulayo, lezi zintuthuko ziveza ithuba elinenzuzo enkulu. Kodwa-ke, ukuvula nokusebenzisa i-dispensary kuyibhizinisi eliyinselele.
Ukuvula izikhungo zemithi kudinga ukucatshangelwa okuningi, ukuhambisana nemithetho eminingi kanye nenani lemali elikhulu.
izindleko zokuvula iminyango yakho e-Illinois zingahle zisuke ku- $ 500,000 ngaphezulu kwezigidi kuya ngezindleko zempahla
Imishanguzo eminingi ye-cannabis ithengisa izigidi zamadola womkhiqizo ngenyanga
umncintiswano wamakhompiyutha amasha e-Illinois uyasabeka.
I-Illinois Cannabis Dispensary application PDF
1. Lungiselela uhlelo lwebhizinisi
Yimuphi umbuzo obaluleke kakhulu uhlelo lwakho lwebhizinisi le-cannabis dispensary elizowuphendula?
Kubiza malini ukuvula i-cannabis dispensary?
Uzodinga uhlelo lwebhizinisi uma ufuna ukuvula i-dispensary e-Illinois. Kunezici eziningana okufanele uhlelo lwakho lwebhizinisi luzihlanganise. Lokhu kuchazwe ngokuningiliziwe ngezansi:
Incazelo Yomkhiqizo / Yensizakalo - Lokhu kufaka phakathi ukuthi uhlela kanjani ukusebenzisa i-dispensary kanye nezici ezihlukile ngakho. Zama ukucacisa ngangokunokwenzeka. Faka imininingwane yezinhlobo zezimbali ozozikhipha nokuthi uzozithathaphi.
Ukucwaninga Kwemakethe - Lesi sigaba sifaka izindlela oyisebenzisile ukukhomba amakhasimende akho okuqondayo nokuthi le datha izokuthinta kanjani ukumaketha, ukusebenza namanani entengo. Sebenzisa njalo izinombolo zokhonkolo (okuqinisekiswe kahle umuntu wesithathu) kunokulinganisa.
Abaqhudelana - Kufaka imininingwane kwamanye amabhizinisi ozoqhudelana nawo, ngokuqondile noma ngokungaqondile. Yini amandla abo nobuthakathaka babo, futhi uhlela kanjani ukwahlukanisa ibhizinisi lakho.
Iqembu Lobuholi - Lesi sigaba sifaka isifinyezo seziqu zakho kanye nalezo zeqembu lakho labaphathi. Ungahlanganisa isipiliyoni sokuthuthuka kwebhizinisi kweminye imikhakha, amakhono obuholi noma insizakalo yamakhasimende.
Ezezimali - Lesi sigaba singamangaza impela. Kubandakanya ukwakha isabelomali esicacile nesifushane. Kufanele ufake isibalo sesikhathi eside (yisho iminyaka emi-5) yezimali ezibandakanya izindleko zokusebenza, inzuzo esetshenzisiwe kanye nemali engenayo yonyaka.
Isimo serekhodi senziwa ngokulinganisa ukuthi ungakanani umkhiqizo ocabanga ukuthi uzowuthengisa izindleko zokukhiqiza, intengo yezitolo nezindleko ezihambisanayo (inkokhelo, ukuqasha, ukuthutha, njll.). Ungafaka futhi ihlaziyo le-break-even, ngomugqa wesikhathi olinganiselwa kuze kube inzuzo.
Izidingo eziqondene ne-Illinois - Ungafaka imininingwane yokumboza izinhlelo zakho zokuphepha, ukuphepha komkhiqizo okuphephile, ukulandela umkhondo womkhiqizo, amasu wokungcola kanye nezinye izidingo zezwe. Qaphela ukuthi lokhu kungafakwa ohlelweni lwakho lokusebenza.
Isincomo sabatshalizimali - sifaka ukuthi uzokwazisa kanjani amasheya akho uma wethula uhlelo lwakho kubatshalizimali. Xhumana ne-CPA ukuze uqinisekise ukuthi uhambisana nemithetho yezwe neyezimali.
Thola i-Cannabis Retail License
Ukuthola ilayisense le-cannabis e-Illinois, noma elinye izwe kungaba nzima kakhulu futhi kubize kakhulu. Umnyango wezezimali wase-Illinois wezezimali nobuchwepheshe (i-DFPR) unikezwe umsebenzi wokunikeza ilayisense e-cannabis e-Illinois. Kunezidingo eziqinile zabanikazi abazoba abahlinzeki be-dispensary.
Abafakizicelo kufanele bahlolwe isizinda, bakhiphe imali ephelele yentela yeminyaka edlule futhi badalule noma yikuphi ukuqothuka noma ukuzenzakalelayo kwemali mboleko yabafundi, i-alimony noma ukusekelwa kwengane. Kufanele uthumele isicelo selayisense yenhlangano yokudluliswa kokusebenzisa kwabadala okunemibandela kanye nemali yesicelo engabuyiswayo engama- $ 5,000. Uma usuthole imvume, kunemali engama- $ 30,000 yemvume ezinyangeni eziyi-12 zokuqala.
Ukuvuselelwa kwemvume yonyaka kubiza u- $ 30,000. Udingeka futhi ukufakazela u- $ 50,000 ku-escrow futhi ukhombise ukwenziwa kwemali eyanele. Qaphela ukuthi kunezinye izimali ezengeziwe ezihambisana nokusebenzisa isizungu.
Lokhu kufaka imali ekhokhwayo yokuvuselela ukubhaliswa kwemithi engu- $ 25,000 kanye nokuvuselelwa kwe-ejenti ekhipha ama- $ 50 (ngakunye), ukufaka amakhadi okukhomba kanye nemali yokubuyisela ebhalisiwe. Ilayisense yokuhlinzeka nge-Illinois isuselwe ohlelweni lwamaphoyinti angama-250. Ngezansi ezinye zezindlela amaphuzu akhishwa ngazo:
Ukuphepha nokugcina amarekhodi
Uhlelo lwebhizinisi, lwezezimali, uhlelo lwephansi necebo lokusebenza
Ulwazi / isipiliyoni esihlobene ne-cannisis
Izindlela Zokuqashwa Nezabasebenzi
Kuyaqapheleka ukuthi uzosebenzisa izinsizakusebenza ezinkulu ekuthobeleni umthetho, futhi kufanele uhlelele kusengaphambili lokhu.
3. Thola Indawo Efanelekayo Yokulahlwa Kwakho
Amalayisense angama-75 okuhweba ngokudla okwenziwa ngabasebenza e-cannabis azokhishwa e-Illinois ahlukaniswe phakathi kwezifunda eziyi-17 Bureau of Labor Statistics (BLS) esifundazweni. Lokhu kwenziwe ukuze kuqinisekiswe ukusatshalaliswa kwezindawo okuyi-cannabis dispensaries. Kusho ukuthini lokhu ukuthi i-dispensary yakho kumele itholakala esifundeni se-BLS esichazwe ngohlelo lwakho lokusebenza lwelayisense.
Uma ilayisense lakho selivunyiwe, uzoba nezinyanga eziyi-6 (izinsuku eziyi-180) ukukhetha indawo ebonakalayo yesitolo sangaphambili sakho. Indawo kufanele ihlangabezane nezimfuneko ezithile. Kunemininingwane engezansi ngezansi:
Kufanele ilungele ukutholakala ngumphakathi
Kufanele kube nesakhiwo esisiza ukwabiwa okuphephile kwe-cannabis
Kufanele yanele ngosayizi, ukukhanyisa, ukwabiwa kwamandla, ukuphathwa komkhiqizo kanye nokugcinwa
Kufanele ube nendawo yokupaka eyanele nokungena okufinyeleleka ngesandla nezindawo zokuphuma.
Akufanele itholakale ngaphakathi kwamamitha ayi-1,000 XNUMX komunye umkhandlu, isikole, indawo yokuhlala noma indawo yokukhonzela.
Ngokunikezwe lezi zidingo, ukwakha i-dispensary yezikhalazo kungabiza noma kuphi ukusuka ku- $ 300,000 kuya kwisigidi esingu-1 ngokuya ngosayizi, ukwakheka nobunzima. Kubalulekile futhi ukuthi uqiniseke ukuthi umnikazi wesakhiwo lapho okuzobekwa khona isabelo sakho kulungile ngebhizinisi. Abanye abanikazi bezindawo kungenzeka bangasekeli ibhizinisi elihlobene ne-cannabis ngenxa yokungekho emthethweni kwezezimali, izikweletu ezingaba khona noma ingcindezi evela komthetho.
4. Thola Umkhiqizo Wakho
Ngokomthetho wase-Illinois, i-cannabis disensary iyadingeka ukuhlinzeka nge-assortment yemikhiqizo evela ezikhungweni ezihlukile zokulima i-cannabis. Uluhlu olutholakalayo oluthengiswa e-dispensary yakho kumkhiqizi oyedwa akumele lunge ngaphezulu kwama-40% we-yokusungula yakho ephelele. Lokhu kuqinisekisa ukuthi amakhasimende akho anezinhlobo ezanele. Kubuye kudumaze abatshali phambili ekuqokeleleni kuphela imikhiqizo yabo lapho sebesungula ama-dispensaries.
Ezinye izifundazwe zidinga ukuthi ama-dispensaries akhule insangu zawo. Ngenhlanhla, lokhu akunjalo nge-Illinois. Kodwa-ke, ungabeka amehlo akho ekusunguleni indawo yokulima lapho i-dispensary yakho ikhahlela. Kungumkhuba omuhle ukuthola i-cannabis yakho ngezindlela ezahlukahlukene. Amakhasimende ahlukahlukene azothanda umkhiqizo ohlukile njengama-edibles, ukugxila, i-dabs noma uwoyela.
5. Thengisa Isikhalazo Sakho se-Cannabis
Imakethe ifaka ukunquma ukuthi yini ehlukanisa ibhizinisi lakho nokuthi ukwazisa kanjani lokhu kwizisekelo zabathengi. Kodwa-ke, ukumaketha i-cannabis dispensary kunama-nuances ayo okufanele ujwayele. E-Illinois, awukwazi ukuzibandakanya nokumaketha okulahlekisayo noma ngamanga, ukhuthaza ukusetshenziswa ngokweqile kwe-cannabis, kufaka izithombe zeqabunga noma ihlumela noma kubonisa ukusetshenziswa kwangempela komkhiqizo.
Awungeke futhi wenze isimangalo sokwelapha noma sokwelapha ngomkhiqizo wakho noma usebenzise izithombe ezingakhanga izingane (ikhathuni, amathoyizi ezifuywayo noma amathoyizi). Futhi, awukwazi ukukhangisa i-dispensary yakho emsakazweni, kuthelevishini noma emotweni yokuhamba komphakathi. Amapulatifomu amahle kakhulu wokuthengisa ama-cannabis dispensaries afaka amawebhusayithi, imidiya yezenhlalo, izinhlelo zokusebenza zeselula (Amamephu weLeafly and Weed), omagazini nezinhlelo zokuthembeka / zokudlulisela.
Izidingo zokuthenga insangu esemthethweni e-Illinois e-Dispensary
Ngo-2013, umbuso wase-Illinois wenza insangu ukuthi itholakale ezigulini eziyidingayo ngezimo ezahlukahlukene zokwelashwa. Umbuso wethula uhlelo lokushayela izindiza waluqamba ngokuthi iCompassionate Use of Medical Cannabis. Kwabhalwa phansi incwadi yeziguli kanti iziguli ezifanelekayo kanye nabanakekeli bazo abaqokiwe babevikelekile ekushushisweni nasekuboshweni.
Khathesi kungu-2019 futhi umbuso wenza insangu ifinyeleleke kakhulu. Umthethosivivinywa osemthethweni ozokwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthenga, ukuhambisa nokuthengisa insangu yokuzijabulisa usetshenzisiwe. Lo mthethosivivinywa, okuwukuchibiyelwa komthetho owedlule ophathelene nensangu uzolawula insangu ngendlela efanayo neyotshwala futhi uvumele ukusetshenziswa kwabantu abaneminyaka engaphezu kwama-21.
The ICannabis Regulation & Tax Act icacisa uhlobo lweklayenti okuhlinzekwa insangu okuzovunyelwa ukuthi ilunakekele. Izakhamizi zase-Illinois zizokwazi ukuthenga insangu ngenhloso yokuzithokozisa kepha ngemigomo elandelayo;
1. Khombisa ubufakazi beminyaka ngaphambi kokuthenga.
2. Ukuthengisa, ukudlulisa noma ukuhambisa insangu kubantwana kuzohlala kuyicala elijeziswayo.
3. Ukushayela ngaphansi kwethonya le-cannabis kuyohlala akukho emthethweni.
4. Ukuthengisa ama-canabis kuzokwenziwa ngendlela esemthethweni yizakhamizi ezikhokha intela.
5. Insangu izohlolwa futhi ifakwe ilebula efanelekile ukuze kuzuze umsebenzisi.
6. Abathengi bazonikezwa lonke ulwazi olutholakalayo mayelana nanoma yimiphi imiphumela emibi esetshenzisiwe ye-cannabis esekelwa ucwaningo olusekelwe ebufakazini.
Ithuba lokukhula kwebhizinisi
Njengoba lo mthetho omusha usuqala ukusebenza maduze nje kuyindaba yesikhathi ngaphambi kokuba imboni ye-cannabis yathuthukiswa ibe imboni eyizigidi zezigidi. Izakhamizi zingawasebenzisa wonke amalayisense ahlukene okumele akhishwe abathuthukisi kanye nabanikazi be-dispensary. Ukuya ngezinsizakalo kubhalo olusha kuyithemba elingokoqobo lokuthi i-Illinois ingasheshe ibe indawo yezithelo futhi akukho okushoyo ukuthi yimaphi amathuba amasha angavela enqubweni.
Izinhlobo ezahlukahlukene zamalayisense e-dispensary e-Illinois
Kunezinhlobo ezintathu zamalayisense ngaphansi komkhakha ohambisa izinto ezichaza indlela osomabhizinisi abangayinikeza ngayo insangu kuhulumeni. Lokhu kufaka phakathi;
1. Ilayisense Yokusebenzisa Ukuvunyelwa Kwabantu Abadala Kwabadala.
2. Ilayisense Yenhlangano Yokusebenzisa Abadala Eyisimo Sokusebenzisa Abasebenzi.
3. Ilayisense le-Adult Use Dispensing Organisation elivame ukubizwa ngalo njengelayisensi yokuhambisa.
Imihlahlandlela yelayisense Yokusebenzisa Isikhathi Sokuvunyelwa Kwabantu Abadala.
Leli yilayisense labahlinzeki be-cannabis abaqinisekisiwe abakhishwe ngaphansi kohlelo lwe-Compassionate of Medical Cannabis Pilot Program. Ukufaka isicelo sabenzi bezicelo zamalayisense kuzodingeka ukuthi bakhokhe imali yokufaka engu- $ 30,000 (engabuyiswa). Uzodingeka futhi nemali engabuyiswa yokuthuthukiswa kwebhizinisi le-cannabis nayo engabuyiswa. Imali izokhokhiswa ku-3% wokuthengiswa komtholampilo ngenyanga kaJulayi 2018 kuya kuJulayi 2019 noma imali ebekiwe engu- $ 100,000 uma izinkokhelo zamaphesenti zeqa leli nani. UYo kuzodingeka futhi akhombise umazisi we-Social Equity Inclusion Plan.
Imihlahlandlela yelayisense Yokusebenzisa Ukuhlinzekelwa Komibandela Enemibandela
Ilayisense inikezwa kusetshenziswa uhlelo oluhle lapho abafaka izicelo abasezingeni eliphakeme benikezwa nelayisense. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ilayisense ayikuvumeli ukuthengiswa noma ukuthengwa kwe-cannabis noma imikhiqizo efakwe i-cannabis. Labo abathola ilayisense bayoba nesikhathi sezinsuku ezingama-180 kusukela osukwini lokuvunywa kokuthola indawo lapho behlose khona ukubeka indawo yabo yezitolo.Layisensi yethulwa ukwehlisa izindleko umholo omusha okufanele akhokhe ukujoyina imboni kanye inemali yokufaka engabuyiseli engu- $ 5,000. Abanikazi bamalayisense kuzodingeka bavuselele amalayisense abo njalo ngonyaka ngenani lama- $ 60,000. NgoMeyi 2020 umbuso uthemba ukuthi uzokhipha leyo layisense engama-75.
Imihlahlandlela yelayisense yenhlangano yabantu abadala
Le yilayisense ejabulise bonke abathintekayo. Ilayisense izovumela amabhizinisi ahambisanayo ukuthi athenge ama-cannabis kusuka kubatshali bezandla, ezikhungweni zokulima, ezinhlanganweni zokucubungula noma kwezinye izisebenzi. Ngale hlobo lwenkampani yokuthola izincwadi ezinamalayisense banokukhanya okuluhlaza okuthengiswa kwe-cannabis kanye nemikhiqizo efakiwe, i-paraphernalia, imbewu kwabanye abathengisi noma abathengi. Lokhu kuzoba nokuqhubeka phambili kokukuthengisela iziguli ezisebenzisa i-cannabis ukwelapha izimo zezokwelapha.
Ukufaka isicelo selayisense abantu kuzodingeka bahlukane nemali yesicelo engabuyiswayo engama- $ 30,000. Lapho ilayisense selinikeziwe, i-dispensary kuzofanela ithole ukuvuselelwa ngemuva konyaka futhi lokhu kuzobiza ama- $ 60,000. Leyo layisense isivele ikhishwe embusweni noMnyango ngethemba lokuthi izokhipha amanye amalayisense ayi-110 ungakashayi umhlaka 21 Disemba 2021.
Amasu webhizinisi uzodinga ukuthola ilayisense le-Dispensary
Kunemibandela eqinile okufanele icatshangwe njengoba ulungiselela ukwenza uhlelo lwakho lokusebenza njengesisebenzi se-cannabis. Uma ufuna ukufaka isicelo selayisense uzodinga izinhlelo ezilandelayo zebhizinisi;
1. Isifanekiso secebo lakho lezezimali
2. Isifanekiso secebo lakho lokuthengisa
3. Isifanekiso samarekhodi esiguli
4. Isifanekiso secebo lokuphepha
5. Isifanekiso sokufaneleka kwendawo ehlongozwayo
6. Isifanekiso secebo labasebenzi
7. Isifanekiso secebo lokufundisa iziguli
8. Isifanekiso sokulawula ukusungula
9. Isifanekiso secebo lokusebenza
I-Marijuana ngezinjongo zokuzijabulisa
Ngenkathi uJB Pritzker enqoba isikhundla sokuba ngumbusi wezwe lase-Illinois ngonyaka ka-2018, abameli bezomthetho balungisa ukugxila kwabo ukuze kusebenze ukusheshisa ukwenziwa kwensangu kwezomthetho. Ukususa insangu ohlwini lwezinto ezivinjelwe futhi ukuluthatha njengelikhulu kungenye yezethembiso zomkhankaso owenziwe lowo msebenzi ezinsukwini zakhe zomkhankaso.
Ngisho njengoba umthetho omusha usuzokwamukelwa ngeke uthinte uhlelo lokushayela i-cannabis nganoma iyiphi indlela. Umthetho ikakhulukazi ugxile ekwandiseni inani lama-dispensaries alindele ukukhuphuka kwebhizinisi le-cannabis ngendlela ehamba kancane futhi elawulwayo. Abafaka izicelo kwezokulingana bazoqhubeka nokuthola ukwelashwa okukhethwayo njengoba uMnyango uthola izindlela eziningi zokusebenzisa le mithetho emisha ngokulinganayo kuzo zonke izifunda. Ngazo zonke izidingo ozidingayo zokusebenzisa ngempumelelo, labo abafisa ukungena embonini bazodinga inhlanganisela yenhlanhla neqembu elihle elisekelayo. Izikhathi zishintsha esifundeni sase-Illinois futhi abathanda amasiko e-cannabis bangalindela ukuthola okuhle kakhulu ku-gerins, imikhiqizo, cannabis paraphernalia.
Ngokugqugquzela okulungile nokufinyelela kuzinsizakusebenza ezidingekayo, lo mhlahlandlela ungakusiza ngempumelelo qala indawo enenzuzo ye-cannabis e-Illinois. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi le nqubo ithatha isikhathi noma ngabe unezinsizakusebenza.
Ngokunikezwa kwezinyathelo zelayisense, ukuthola indawo efanelekile nokuthuthukisa isitolo sakho sangaphambili ukuhlangabezana nezidingo zombuso, kungathatha isikhathi esingaphezu konyaka.
Imboni ye-cannabis ilawulwa kakhulu futhi ithola usizo embonini, futhi ochwepheshe bebhizinisi bayancomeka.